भूकम्प पीडितलाई आएको सहयोग खै कहाँ गयो? |
भूकम्प पीडितलाई आएको सहयोग खै कहाँ गयो?
12 March, 2016 | Sandeep Bhattarai | 665 Views | comments
देश विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनिहरुमा हार्दिक नमस्कार । आज एकपल त्यो कालो दिनको सम्झना आयो । ११ महिना अघि अर्थात् वैशाख ११ र वैशाख २९ । ती दिनहरु नेपालको कालो दिन नै बन्न पुगे । त्यो बेला सारा नेपालीहरु रोइरहेको थिए त्यती मात्र होइन विश्वले हामीलाई हेर्दै तत्कालिन, दिर्घकालिन सहयोग पठाइरहेको थियो । विदेशिएका सारा नेपालीहरु सहयोगको याचना गर्दै विदेशीको अगाडी हात फैलाउँदै थिए । त्यसैबेला सुनिएको थियो कोही वीर गोर्खालीले त भूकम्पमा सहयोग उठाएर घर बनाउनु भयो रे । कोही हाम्रा माननीय नेताज्युहरुले त भूकम्प पीडित भन्दै आफ्ना परिवारलाई चीनसम्म घुम्न पठाउनु भयो रे ।
क्या गजवको छ नेपाल अनि हामी सज्जन नेपालीहरु । हाम्रा सम्माननीय नेताज्यूहरुको त कुरै नगरौ । तर विडम्बना हामी कसैले नि भूकम्पको सहयोग कहाँ गयो भनेर प्रश्न उठाउँन सकेनौ । सायद विश्वले दिएको सहयोग हामीले सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न सक्थ्यौ भने नेपाल आफैमा जापान, अमेरिका बन्न सक्थ्यो । गलत हामी नै छौ । खोइ आजसम्म प्रश्न उठाउन सकेको ? भूकम्पको सहयोग कहाँ गयो ? नेपाल कहिलेसम्म भद्रगोल बनिरहने हो ? नेपाल कहिले बन्ने ? गणतान्त्रिक नयाँ नेपालमा आजसम्म दाहाल, खनाल, नेपाल, भट्टराई, कोइराला, ओली जो आए पनि केही भएन नेपालमा । लडी लडी आयो आफ्नो सात पुस्तालाई टन्न बनायो गयो । आफ्नो क्षमताले त नेपाल बन्दै बनेन । कहिले बन्ने हो यो बेला नबने ?
भूकम्प आइरहँदा बाहिर मान्छेहरु भन्ने गर्थे नेपाल हाइटी नबनोस् जापान बनोस् । तर नेपाल हाइटीको बाटोतिर जाँदै छ । हामी यस्तो छौ अरुले दिएको सहयोग त उपयोग गर्न सक्दैनौं आफूले के गर्छौ होला । नेताहरु चैनबैन र मोजमस्ती गर्नमा ब्यस्त हामी नेपाली जनताहरु ती नेताहरुको पछि लाग्नमै व्यस्त । देश–विदेशमा विभिन्न सामाजिक संघसंस्था देखि एनआरएनसम्मका संघ संगठनहरु छन् तर खोइ कुरा सकेको, कुरा उठाउने को ? प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरेको रे । खोइ कहाँ गयो त्यो सहयोग ? हामी नेपालीहरु यति सज्जन छौं, राम्रो कुरालाई होइन नराम्रो कुरालाई मज्जाले साथ दिन्छौं । हे प्रभु नेपाल केही त बन्दै बनेन भूकम्प पीडितले केही पाउँदै पाएनन् ठीक छ तर भूकम्पको सहयोग कहाँ गयो ? प्रश्नको उत्तर कसले दिने ?
आज एक वर्ष हुन लागिसक्दा पनि सरकार मौन छ केही गर्ने योजना छैन । कहिले बन्छ नेपाल ? अझ हाम्रो अत्यन्तै हितैसी मित्र भारतले नाकाबन्दी मात्र के गरेको थियो हाम्रा नेतादेखि मन्त्रीसम्मलाई क्या सजिलो भो भने केही गर्नै परेन । के खोज्छस कानो, आँखा जस्तो भो । कहिलेसम्म नेपाल यस्तै हुने हो ? भूकम्पले भत्किएका नेपालका धरोहरहरु कहिलेसम्म बन्ने हुनु ? यतिबेला सरकार पनि जवाफविहिन छ होला । अब त लाजैमर्दो भो नेपाललाई ठूलो सहयोग गरेको जापानका राजकुमारले नेपालमा के के हुँदैछ भनेर प्रश्नसम्म सोधेका छन । यसको जवाफ के दिने ? हामीलाई जवाफ चाहियो ! सरकार नेपालमा केके हुँदैछ ? भूकम्पको सहयोग कहाँ गयो ?
(चोखाल नेपाल जापान विद्यार्थी समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन । )
#Views/ Aticle Of Santosh Chokal